The Global Intelligence Files - DISCUSSION - ZIMBABWE - First results from Zimbabwe Senate election show neat	split
DISCUSSION - ZIMBABWE - First results from Zimbabwe Senate election show neat	split
DISCUSSION - ZIMBABWE - First results from Zimbabwe Senate election
show neat	split
So a run-loff?
First results from Zimbabwe Senate election show neat split
Posted : Fri, 04 Apr 2008 06:24:29 GMT
Johannesburg/Harare - Almost a week after Zimbabwe's elections, with no
sign of results from the crunch presidential contest, President Robert
Mugabe's Zanu-PF party and the opposition Movement for Democratic Change
(MDC) were neck and neck in the Senate race. The Zimbabwe Electoral
Commission began releasing results from the Senate vote late Thursday.
By Friday morning, with 10 seats counted, Zanu-PF had 5 seats against 5
for the MDC, confirming a trend noticed in the earlier announcement of
results in the 210-seat House of Assembly of a neat 50-50 split.
Eventually the opposition pulled ahead in the parliamentary contest
finishing with 109 seats to Zanu-PF's 97 in Mugabe's party's first
electoral defeat since the 84-year-old leader came to power in 1980.
Zimbabweans are still waiting to know if Saturday's election turned up a
new president. The MDC has already declared MDC leader Morgan Tsvangirai
victorious with 50.3 per cent of the vote from its own unofficial vote
ZEC had said it would issue all the results within six days of the
election, that is, by end of Friday.